Android 6.0 Muffin သည်ဤသို့ဖြစ်မည်လား။ | Androidsis
Android operating system အသုံးပြုသူများသည်ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ်မည်မှာသေချာသည် Android operating system ဗားရှင်းသစ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဤအမှု၌ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့, အသစ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းသို့မဟုတ်ပင်ဝံ့ပါလိမ့်မယ် Miroslav vitulaအသစ်သောအဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုခန့်မှန်းရန် Android 6.0 Muffin သူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှကာတွန်းနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအပါအဝငျ။
အဆိုပါထိုကဲ့သို့သော miroslav ဗီလာသူသည် Android ဗားရှင်းမှလာမည့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များအားသတိပေးသည့်ဘုရားသခင့်ရူပါရုံတစ်ခုရခဲ့သကဲ့သို့၎င်းကိုသူမအမည်ဝံ့ခဲ့သည်။ Android 6.0 သည် Muffin အမည်ကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်,
Android 6.0 Muffin တွင်ပြတင်းပေါက်များစွာနှင့်အမြန်တုံ့ပြန်မှုများ
ဒီဆောင်းပါး၏ခေါင်းစီးတွင်ပူးတွဲပါသောဗွီဒီယိုတွင်၎င်းပေါ်တွင်တင်ထားသောဗီဒီယိုတွင်သင်မည်သို့မြင်နိုင်သနည်း Android Hackz You Tube ရုပ်သံလိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဗားရှင်းအသစ်မှသူတို့မျှော်လင့်သောအရာများသို့မဟုတ်ဘာလိုချင်သည်ကိုသိနိုင်သည် Android 6.0 Muffinအချို့သောလုပ်ဆောင်မှုအသစ်များသည် Andy ၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုသူများမှသမိုင်းကြောင်းအရတောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးအဓိကအားဖြင့် Android Terminal ထုတ်လုပ်သူများ၏အထင်ကရပစ္စည်းများသည်၎င်းတို့၏ terminal များတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တရားခံ မျိုးစုံပြတင်းပေါက် application များစွာနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင် screen တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ် floating windows များ (သို့) ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သည် ကိုယ်ပိုင် Heads Up ကိုအကြောင်းကြားစာများမှတဆင့်အစာရှောင်တုံ့ပြန်မှု.
ဗီဒီယိုမှာတော့ Vladislav ကဖြစ်နိုင်ချေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသရဲတယ် ဒီ Android 6.0 Muffin ဗားရှင်းအသစ်မှာရရှိလာမဲ့အကူးအပြောင်းများနှင့်ကာတွန်းရုပ်ပုံများ ၎င်းသည် Google ၏ Android developer များ၏ဓာတ်ခွဲခန်းများသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်များတွင်ပြုလုပ်နေပြီးဖြစ်သည်။
စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သည့်အပြင်အိပ်မက်သည်မည်သူ့ကိုမျှမထိခိုက်စေဘဲအခမဲ့ဖြစ်သည်ဖြစ်သောကြောင့် Miroslav Vitula ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်အိပ်မက်များကိုမျှဝေပေးသည့်အတွက် Android ၏နောက်ထပ် version သည်ဆန့်ကျင်ဘက်အားသက်သေပြနိုင်သည့်တိုင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူတို့လက်ခံခြင်းတက်အဆုံးသတ်ရသောဂိမ်း Taboo ၏လူကြိုက်များကြေညာချက်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ ရေနေတိရိစ္ဆာန်အဖြစ်သင်္ဘောကျနော်တို့အဲဒီအခိုက်အဘို့ကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ် "Muffin" အသစ်နှင့်အမည်မသိဗားရှင်း၏နာမကိုအမှီဖြစ်လိမ့်မည် Android 6.0 Muffin.
Android 6.0 Muffin ရဲ့ဒီသဘောတရားအသစ်ကိုသင်ကြိုက်လား။သင့်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအသစ်များထပ်ထည့်လိုပါသလားလှေကိုရေနေသတ္တဝါအဖြစ်လက်ခံပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဒါက Google 6.0 Muffin version အသစ်နဲ့ငါတို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာလား။
အဆိုပါ cocks အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမယ့်ငါလိုချင်သည်မှာ pete ပါဘူး, crash ပါဘူး, ပေါ်လာပါဘူး, သောတည်ငြိမ်သောသည်မတည်သော Android ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့မှာ Nexus4 မှာ Lollipop ရှိနေလို့ငါ့အတွက်တော့ဘယ်တော့မှပိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။
Vladislav? ဗီဒီယိုမှာ MIROSLAV (နှင့်ဓာတ်ပုံများပါ) ပြောတယ်။ သူတင်မယ့်အရာကိုဘယ်သူမှမစစ်ဆေးဘူး။ ထို့အပြင်ထိုဂရပ်ဖစ်ဒဏ်allာရီများအားလုံးသည်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ အမှားအယွင်းများစွာ၏ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကိုမရပ်တန့်စေနိုင်သည့် Lollipop ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
အလွန်စစ်မှန်သောမိတ်ဆွေ၊ သူ Miroslav အမည်ကို Vladislav သို့ပြောင်းရန်သူစဉ်းစားနေသည်ကိုမသိပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာပြီးသားတညျ့ဖြစ်ပါတယ်